Sayer, Jaguar မှစမတ်ကျသောစတီယာရင်ကိုအနာဂတ်၌သင်နှင့်အတူလိုက်ပါလိမ့်မည်။ | Gadget သတင်း
လတွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှငါတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိလာတယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများမှာကားကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်။ ဒါဟာနည်းပညာတွေသူတို့ရဲ့နို့စို့အရွယ်၌နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမှန်သည်။ အများပြည်သူသုံးလမ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အုပ်ချုပ်ရေးများမည်သို့ပြုမူသည်ကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောခြေလှမ်းများရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုရည်ညွှန်းသည် ခရီးသည်အခန်းအတွင်းမှအချို့သောဒြပ်စင်များဖျက်သိမ်းခြင်း။ ကျနော်တို့က၎င်း၏နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်စမတ်အယူအဆကိုကြည့်ပါ စမတ်ရူပါရုံကို EQ Concept ကို, ငါတို့မြင်နိုင်ပါသည်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့မှကြီးမားသောမျက်နှာပြင်များအတွက်လမ်းစေရန်ထိုကဲ့သို့သောစတီယာရင်ဘီးသို့မဟုတ်နင်းကဲ့သို့သော element တွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြကြောင်း။
သို့သော်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော Jaguar Land Rover သည်ထိုကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်များအားလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ခြင်းမှနှုတ်ထွက်ခြင်းမပြုပါ။ ဒါကမွေးဖွားရာအရပ်ပါပဲ ဒီအယူအဆဟာ Sayer အဖြစ်နှစ်ခြင်းခံပြီး ၅၀ နဲ့ ၇၀ ကြားမှာကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ Malcolm Sayer.
Jaguar Land Rover ၏အကြံဥာဏ်မှာဤသို့ဖြစ်သည် - အနာဂတ်၌ကားများအားလုံးကိုယ်ပိုင်ကားဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကပတ်ပတ်လည်ရန်ယာဉ်မောင်းမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပါတယ် အသုံးပြုသူများအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သောမော်တော်ယာဉ်များရှိသည်မယ်လို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများကွန်ယက်ရှိလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်းအသုံးပြုသူနှင့်အတူလိုက်ပါမည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ Sayer စမတ်စတီယာရင်ဖြစ်သည်။ ၀ ယ်ယူသူအားကွန်ယက်ပေါ်ရှိမည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆို ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံရန်နှင့်သူ၏အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုမည့်အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူလိုက်ပါမည့်ဒီစတီယာရင်။ ဤ Sayer စတီယာရင်ကိုကိုယ်ပိုင်ကားတစ်စီးစီ၏အခန်းနှင့်တွဲထားသည် ခရီးစဉ်အတွင်းအပန်းဖြေမှုများကိုဂရုစိုက်ပြီးဖောက်သည်၏အချိန်နှင့်ခရီးစဉ်များကိုလည်းစီမံနိုင်သည်။
အလားတူပင်၊ မည်သည့်အယူအဆမဆိုကဲ့သို့ပင်ဤ Sayer flyer သည်ကဏ္inတွင်နေ့စဉ်ပေါ်ပေါက်လာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောအတွေးအခေါ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကတစ်ချိန်ချိန်လည်ပတ်ကြည့်ရှုကြမည်နည်း ၎င်းသည်အလွန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုသင်မငြင်းနိုင်ပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတီယာရင်နှင့်အနာဂတ်အတွက် F1 မောင်းနှင်မှုပုံစံမျိုးဖြစ်ရန်စိတ်ကူးသည်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Sayer သည် Jaguar မှစမတ်ကျသောစတီယာရင်ဖြစ်ပြီးအနာဂတ်တွင်သင့်အားလိုက်ပါလိမ့်မည်